Mark Dean, onye ojii ojii America nke IBM PC - Afrikhepri Fondation
Mark Dean, Black American mebere IBM PC
NAmụrụ na Jefferson City, Tennessee na Machị 2, 1957, Mark Dean chọpụtara na ihe ịga nke ọma rụpụtara ọrụ ọbara ya. Nna nna ya bụ onye isi ụlọ akwụkwọ na nna ya rụrụ ọrụ dịka onye nlekọta maka Dam Tennessee Valley Authority. Nwata mara mma ma nwekwa ume, ọ na-ajụkarị ajụjụ site n'aka ụmụ klas ya elementrị, na-ajụ ma ọ bụ onye ojii n'ezie n'ihi na ndị isi ojii ekwesịghị ịbụ ndị maara ihe. Mark bụ onye ama ama n'egwuregwu ụlọ akwụkwọ sekọndrị yana nwa akwụkwọ kwụ ọtọ. Ọganiihu ya gara n'ihu na kọleji, ka ọ gụchara klasị ya na Bachelor of Biology in Electrical Engineering na Mahadum Tennessee na 1979.
Na 1980 Dean ka a sonyere IBM dị ka injinia. N'agbanyeghị ọkwa ọhụrụ ya, ọ gara n'ihu na agụmakwụkwọ ya wee nweta nzere masta masters na injinịa ọkụ na Mahadum Florida Atlantic na 1982. Dị ka injinia maka IBM, ọ naghị ewe ogologo oge iji nwee nnukwu mmetụta, na-eje ozi nke onye isi ndị injinia maka otu ndị mepụtara IBM PC / AT, kọmputa ụlọ / ụlọ ọrụ mbụ. Na ya otu Dennis Moeller, o mepụtara Bus Industry Standard Architecture (ISA) usoro, ihe mmewere na-ekwe multiple ngwaọrụ dị ka a Modem kọmputa na-ebi akwụkwọ na-jikọọ a PC, na-eme na PC ihe oké ọnụ, adaba flaapu nke ụlọ ma ọ bụ ọrụ nke obere azụmahịa. Dean ga - enwe ihe atọ n'ime ihe nchọpụta mbụ nke itoolu na PC niile dabeere. Dean soro ụdị PS / 2 ụdị 70 ma ọ bụ 80, yana ihe nkwụnye eserese agba (nke mere ka o kwe omume maka ngosi agba na PC).
N'agbanyeghị nnukwu ihe ịga nke ọma ya, Dean ghọtara na e nwere ọtụtụ ihe ọ ga-amụta na karịa ihe ọ nwere ike nweta, ya mere ọ banyere Mahadum Stanford na 1992 wee nata akara doctorate. na injinia ọkụ. Afọ ise ka nke a gasịrị, a họpụtara ya onye nduzi nke Ụlọ Ọgwụ Austin Research na onye nduzi nke mmepe nkà na ụzụ dị elu maka ìgwè IBM Enterprise Server. N'okpuru ndu ya, na 1999, ndị otu ya mere ọtụtụ ọganiihu, gụnyere ịnwale microprocessor mbụ CMOS nke ụwa. Site na nnukwu ihe ịga nke ọma a, a họpụtara ya onye osote onye isi maka usoro nyocha na IBM's Watson Research Center na Yorktown Heights, New York, mgbe ahụ onye isi oche nke IBM's Storage Technology Group, lekwasịrị anya atụmatụ nchekwa usoro na teknụzụ ụzọ ụlọ ọrụ ahụ. A họpụtara ya onye osote onye isi maka akụrụngwa na usoro ihe owuwu nke IBM's Systems and Technology (STG) na Tucson, Arizona, yana onye osote onye isi oche nke IBM's Almaden Research Center na San Jose, California.
Na mgbakwunye na aha ndị nwere aha ha, akpọrọ Dr. Dean aha IBM Fellow, nsọpụrụ kachasị elu nke ụlọ ọrụ nyere (naanị mmadụ 50 nke ndị ọrụ IBM 310 bụ ndị ibe IBM na ọ bụ onye mbụ A na-asọpụrụ agbụrụ Africa). Na 1997, ya na enyi ya Dennis Moeller, e webatara ya na Inlọ Nzukọ Ezumezu nke National (withlọ Nsọ nke otu ihe dị ka 150) ma na 2001 ka a hoputara onye otu National Academy of Engineers. Na ihe karịrị 40 patents ma ọ bụ patents na-echere, Dr. Dean nwere ike ịmalite ịnọgide na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ụwa nke sayensị na ụlọ na ọrụ.
Afrịka, ihe eji eme ihe na igwefoto - Xavier Harel
Mee ka ihe ịchọ mma gị (PDF)
Mmiri mmiri Hippo iji mee ka ndị bi n'ime ime obodo na-ebu mmiri